Oganda: Adihevitra Taorian’ny Fanambarana Nataon’ny Filoha Mikasika ny Solitany · Global Voices teny Malagasy
Oganda: Adihevitra Taorian'ny Fanambarana Nataon'ny Filoha Mikasika ny Solitany
Voadika ny 12 Febroary 2012 10:37 GMT
Niatrika ny parlemanta ny filohan'i Oganda Yoweeri Kaguta Museveni tamin'ny 10 Febroary 2012 mba hanome vaovao ho an'ny firenena mikasika ny tsy fahampian'ny herinaratra sy ny fitrandrahana solitany ao amin'ny renirano Albert. Museveni nanambara fa tamin'ny taona 2006 no nahitana ny fisian'ny solitany, taorian'ny fikarohana an-taonany maro.
Museveni nanohana ny fanapaha-kevitry ny governemanta ny amin'ny tokony hanaovana sonia fifanekena sy fanomezana fahazoan-dalana hitrandrahana solitany ho an'ny orinasa Tullow na dia eo aza ny vahaolana avy amin'ny Parlemanta manohitra izany fanomezan-dalana izany. Nilaza izy fa hitondra tombotsoa ho an'i Oganda ny fifanekena momba ny solitany. Nanamafy ihany koa izy fa manonitra ny fotoana very nandritra ny adihevitra mikasika ny solitany ireo fahazoan-dalana anankiroa nomena ny Orinasa Mpitrandraka Solintany Tullow ireo.
Sarintany misy ny toerana fitrandrahana solitany ao amin'ny renirano Albert ao Uganda. Sary tao amin'ny tullowoil.com.
Vao vita ny fanambarana nataon'ny filoha, nanomboka niadi-hevitra tamin'ny alalan'ny tambazotra an-tserasera isan-karazany ny mpiserasera Ogandey. Tao amin'ny Twitter, nampiasa teny fototra #Museveni, #OilDebate, #Uganda ohatra ireo mpisiokantserasera.
@Haggae nanoro hevitra:
@Haggae: Satria Hidina ny vidin'ny solitany ao atsy ho atsy, tsy tokony ho tara i Oganda hanararaotra amin'ny fivarotana izany @ amin'ny vidiny ambony, izany tokoa ve Mr.#Museveni?? #oildebate
@Haggae:Toy ny poak'aty ny lahatenin'i # Museveni mandresy lahatra fotsiny ny #MPs mba hialana amin'izay heverin'ny filoha fa “fahadisoana ny fanemorana izany indray # oilproductn ‘# oildebate, # Ouganda
@Loyce09 tsy manana fanantenana:
@RosebellK nihevitra fa firenena tsy hahazo tombotsoa amin'izany i Oganda:
@RosebellK: Halain'ny orinasa mpitrandraka ny solitany 74 % + Kaguta 26 ambiny ka haka tombony eo amin'ny 90 % eo ny orinasa #Uganda tsy hahazo na inona na inona. #oildebate
Nilaza tamin'i Museveni koa izy fa ny taona 2012 dia tsy mitovy ny tamin'ny taona 1985, taona teo am-pandraisany ny fitondrana:
@RosebellK: Kwonka an'i #Museveni Kaguta ao #Uganda tsy menatra!! #Uganda tsy mila mihaino ny kabarinao ka hihevitra toa anao toy ny tamin'ny taona 1985. Taona 2012 isika izao!!!
Yoweri Museveni miaraka amin'ny solombavambahoaka Ogandey ao amin'ny parlemanta. Sary tao amin'ny ugpulse.com.
@andykristian te-ahafantatra raha manankery ny fifanekena hitrandraka solintany na tsia:
@andykristian: Misy mpisolovava ve any an-trano? Nanitsaka lalàna ve ny Governemantan'i #Museveni tamin'ny fanaovan-tsonia ny fifanekena hitrandraka solitany? Manankery ve ny fifanekena natao sonia? #OilDebate
Nampitandrina ny amin'ny voka-dratsin'ny solitany izy:
@andykristian: #Museveni, ajanony ny fampandriana andrisa ny vahoaka – #Ugandans. Hoentinao any Etazonia ny voka-dratsin'ny solitany! Avelao ny Governemanta, Miangavy anao izahay azafady!!!#OilDebate
@pmagelah nilaza fa tokony nanontany ny hevitry ny solombavambahoaka i Museveni alohan'ny hanaovana sonia ny fifanekena
@pmagelah: Hitako fa olana tokoa ny tsy firaharahian'ny filoha ny parlemanta, fa nahoana no tonga fotsiny mampandre azy ireo izy, raha tokony hanontany ny heviny aloha#OilDebate
@DavidTumusiime nanontany hoe:
@DavidTumusiime: ARAK IZANY…maika fotsiny hanao sonia niaraka tamin'ny orinasa mpitrandraka #Tullow haingana satria nahoana…? #oildebate12
@gothrockstar80 nandrisika ny governemanta mba hampandroso ny sehatry ny fambolena aloha:
@gothrockstar80: 80% ny Ogandey no ao anatin'ny sehatr'asan'ny fambolena. Tokony hampandrosointsika aloha izany sehatra izany ary avela any ny resaka solitany #oildebate12#Uganda#oildebate#Tullow
Tao amin'ny Facebook, Tugumenawe Athanazius nanoratra hoe:
Misento ny Ogandey. Ahoana ny fomba ahafahan'ny filoha mampiseho tatitra feno fahadisoana eo amin'ny firenena ao amin'ny parlemanta sady tsy mba niaiky koa izy????!!!!!!!!!!